घर दक्षिण अमेरिका फुटबल स्टोरीहरू ब्राजिलियन फुटबल खेलाडीहरू रेivalival बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
एलबीले पूर्ण स्टोरीको फुटबल कथालाई सब भन्दा राम्रो भनिन्छ उपनाम; "पूरा प्याकेज"। हाम्रो प्रतिद्वंद्वी बचपन कथा प्लस अनलल्ड जीवनी तथ्यहरूले तपाईंलाई बचाउनु पर्ने घटनाको पूर्ण खाता आफ्नो बचपनको समय सम्म पूरा गर्दछ। विश्लेषणमा प्रसिद्धि, पारिवारिक जीवन र उनको बारे मा धेरै ज्ञात तथ्याङ्क धेरै भन्दा पहिले आफ्नो जीवन कथा समावेश गर्दछ।
हो, सबैले आफ्नो क्षमताको बारेमा चिन्ता छ तर केहीले रोयलडोडोको जीवनीको बारेमा विचार गरे जुन धेरै रोचक छ। अब थप adieu बिना, सुरु गरौं।
रेivalival बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -बाल्यकाल
रिलिल्डो विर्टर बोर्बा फ्रेरेरा ए.एस. रेवाल्डोले अप्रिल 19 को पलिस्टा, पर्नबोबोको, ब्राजिलमा 1972th दिनको जन्म भएको थियो। उहाँ आफ्नो आमा, मार्लोसिया सालोमो बोराबा र बुबा, लेट रोमलेस फरेरामा जन्मेका थिए।
रेवलिल्ड गरीबी गरीबीमा जन्मिएको थियो र ब्राजीली फेभले स्लममा दुखाइको असर पर्थ्यो। यो ब्राजिलको कम आय आयको क्षेत्र हो जुन यसको बासिन्दाहरु बीचको गरीबी गरीएको छ।
रिलिल्डोको भौतिक उपस्थितिले गरिबीलाई उनीहरूको बचपनमा अनुभव गर्दछ। यो तल चित्रण गरिएको हो यसको चिन्ह हो।
त्यसपछि पछि, पोषणको कारणले उनीहरूमा धनुषा-कथितता उत्पन्न भयो जुन अझै पनि वयस्क भए। रविद्विलाई थाहा थियो कि धेरै दाँतहरू हराएका छन् जुन उनको बचपनको समयमा पुरानो कुपोषणको परिणामस्वरूप चल्थ्यो।
धेरै पहिले उनको जस्तै, रivalivaldo फुटबल मा एक प्रेम र उनको उद्धार को लागि एक आशा भेटिन्छ। तथापि, तिनको बचपनको कठिनाईले उनीहरूको सपनाहरू बर्बाद गर्यो।
रिभोराले कहिल्यै दिएनन्। उनले प्रशिक्षकको रूपमा सफल हुनको लागि दृढता राखेका थिए, प्रशिक्षकहरूको संदेहको बावजूद उनीहरुका खुट्टाहरू पनि धनुषा र फुटबलका शत्रुहरूको सामना गर्न कमजोर थिए। यी शब्दहरू सुन्नको बावजूद, उनी अझै फुटबलको शीर्ष 100 उत्कृष्टहरूको एक हुन सफल भए।
रेivalival बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -सम्बन्ध जीवन
फुटबल किंवदंती थियो पहिले 1993-2003 बाट प्रायः दस वर्षको लागि पहिलो महिला, गुलाब फ्रेरेरासँग विवाह भयो। उनको विवाह विवादास्पद भइन्थ्यो, किनकि उसले दुर्व्यवहार गरेको धोका आरोप लगाएको थियो।
यो सूचित भएको थियो कि गुरू फरेरारा हिंड्यो उनको धोखाधडी स्क्यान्डल पछि उनको विवाह पछि को विश्वव्यापी सर्वश्रेष्ठ फुटबलर को रूप मा धेरै प्रसिद्धि प्राप्त गरे पछि उनको जीवन पछि आए जो रिलील्डो को पतन गरे जो उस समय दो प्रेमिकाहरु लाई डेटिंग गर्दै थिए।
यसले विवाह विच्छेद र तलाकको कारण बनायो। गुलाब दुई छोराछोरीको आमा बन्नुभयो (रिलिनाउन्हो र बेटी थामिरिस) उनीहरूले सबैलाई तल बढेको चित्रण गरेका छन्;
तलाक को समयमा जब दुवै बच्चा धेरै जवान थिए, गुलाब उनलाई मिलान मिलन ब्राजीलमा फर्कियो जहाँ उनको पूर्व पति खेले। यसले बनाएको रेल्लिडोडोले मिलानको वातावरणलाई उनको एक प्रेमिकाको साथ छोड्यो। अन्तमा उहाँ ग्रीसमा बसोबास गर्न ओलम्पियको लागि खेल्नु भयो।
दुर्भाग्यवश, रेवलडो पूर्व-पत्नी मरेको छ। मृत्युको कारण अहिले अज्ञात छ। रिलिडोडले यो समाचारलाई एकै ठाउँमा देखाए इन्स्टाग्राम 14th जनवरी 2015 मा पोस्ट गर्नुहोस्।
उनको तलाक पछि, रिलिडडो ग्रीस को लागि खेल्यो उनको दुई प्रेमिका एक ले। यो समय, यो त्यो सबैभन्दा मनपर्ने एक थियो। एक जना जसले आफ्नो कपाललाई माया गर्दथ्यो। छनौट महिला सुन्दर एलिजा कामिस्की फ्रेरेरा भयो।
उनले तिनको धेरै राम्रो हेरचाह गरे जस्तै फोटोमा देखिने। यसले बनाएको रितोदोदो उनको विवाह। उनले उनको ब्राजीलियन क्लबमा उनको ठूलो दाबी पनि गरे।
उनको विवाहको तुरुन्तै, यसलाई घोषणा गरिएको थियो कि एलिजा को उनको पति द्वारा उनको फुटबल क्लब को उपाध्यक्ष को रूप मा नियुक्त गरिएको छ, मोगी मिर्मिम। नोट: Rivaldo स्वामित्व र 43 को बूढा उमेर मा यस क्लब को लागि पनि खेले।
अझै पनि, नियुक्तिमा, रेलिडोडोले एलिजालाई विलसन बोनेटीलाई बदल्नुभयो, जो 20 साताका अभियोजक थिए र उनको वकीलले आफ्नो पूर्व पत्नीको समेत उनको सबै कानूनी लडाइँ लडेका थिए। थप यति, अनुसार अनलाइन रेकर्ड, एलिजा को नाम मा अन्य फुटबल क्लब को हिस्सेदार को रूप मा पनि नियुक्त गरिएको थियो, R10 Soccer School, LLC अझै पनि उनको पति को स्वामित्व वाला छ।
उनको सुन्दर एलिजा कामिस्की फ्रेरेरा संग, रिवलडोले दुई छोरा जन्माए; (जोआओ विटर फर्रेरा, इजक्रे फ्रेरेरा) र दुई छोरीहरू अर्थात्; थामिरिस बोराबा फरेरा र रिबेका रिबेका फ्रेरेरा। तल तिनको परिवारको चित्र हो।
रेivalival बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -इतिहास बनाउने
रविद्वारले आफ्नो पुत्र (आफ्नो विगतका पूर्व पत्नीबाट) सँगसँगै खेल्न सक्ने एकमात्र बुबाको रूपमा इतिहास बनाएका थिए र अचम्मको खेलमा र उनको क्लबमा दुवै आश्चर्यचकित भए।
वास्तवमा, फुटबलको इतिहासमा पहिलो पटकको लागि, रेल्भाडो परिवारको तीन पीडितहरू XV डी पिराकाइकबा विरुद्ध खेलमा संलग्न थिए किनभने यो प्रतियोगिता रोभाल्डोको बुबाको नाममा एक स्टेडियममा एस्ट्रिया रोमलेस फ्रेरेरामा भएको थियो।
Rivaldo परिवारले साँच्चिकै फुटबल इतिहास पुस्तकहरूमा रमाईन, रेकर्डको पुस्तक गिन्निको नाममा उनीहरूको नामहरू एन्च गरेको छ।
नोट: ब्राजीलियन किंवदंती 43 (माथि चित्रित) त्यस समयमा उनले पिङ्गमा आफ्नो 20 वर्षीय छोरामा सामेल हुनका लागि म साई पाउलो राज्य लीग म्याचमा मुगि मिमिमको लागि बेंच अफ गरेका थिए।
रेivalival बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -भ्याल ग्वालसँग मुद्दा
1999 मा, रिivaldo आफ्नो क्यारियर को चोटी मा थियो र पनि त्यहि वर्ष Ballon d'Or जीता।
ब्राजिल र बर्गे लीजेंडले उनको टोलीलाई सुझाव दिए, भ्यान गल कि उनले स्ट्राइकर पछि खेल्न र आफ्नो सामान्य बायाँ विंग स्थितिबाट चल्नु पर्छ। यो राम्रो तरिकाले तल झरेको थिएन भ्यान गल उनको जागिर को लागी उनको नौकरी को सिखाने को लागि उनको आकस्मिकता। यो परिणाममा रेल्भाडो वान गाल द्वारा धेरै खेलहरु को लागि बेंचिंग गर्दै छन्। नोट: त्यो समयमा प्रतिद्वंद्वी सर्वश्रेष्ठ फुटबलर थियो।
एक जोडी जो साथीहरु पछि पछि दुश्मन भए। भ्यान गल एक पटक तल चित्र मा प्रशिक्षण सत्र को समयमा शारीरिक रूप देखि सामना गर्न को प्रतिद्वंद्वी रइलिडोडो को आरोप लगाया थियो। यसले बनाएको रेवलिल्डोले एसी मिलानलाई स्थानान्तरणको अनुरोध गर्यो।
साथीहरूलाई दुश्मनबाट- रिलिडोको कथा र भ्यान गाल
बेंच रिवलडोडोको डचम्यानको निर्णयले स्पेनिस प्रेसले लगातार निरन्तरता पायो। कहिले भ्यान गल पहिलो पटक बायाँ स्पेन, रिवलडो सहित मीडियाले आफ्नो प्रस्थान मनायो।
रेivalival बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -विवाद
रेइलिडोडले 2002 मा विश्व कप जित्यो र लुइज फेलिप स्कोलारीका पुरुषहरुसँग। उनको विजयी विवाद भएको थियो जब टर्कीका हानान अनसनले गोल गरेपछि बलबाट अनुहारमा हिट गरेपछि उनको जांघमा फसेको थियो।
रेivalival बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -पारिवारिक जीवन
दुर्भाग्यवश रावलडोडोको पिता रोमलेस फ्रेरेराले एनएनएनएक्सक्समा सडक दुर्घटनामा मारेको थियो।
रोम्लेले आफ्नो छोरालाई उनको फुटबलिंग सपनाको पछि लाग्न प्रोत्साहित गरेको थियो र उनको मृत्यु रिवलडोमा ठूलो व्यक्तिगत झटका थियो जुन उनको समयमा आफ्नो व्यावसायिक क्यारियर सुरु गर्ने योजना थियो। तथापि, प्रतिद्वंद्वीले आफ्नो क्यारियर सुरू गरे र व्यक्तिगत दुर्व्यवहार र उनको शङ्कास्पद दुबैलाई पराजित गर्न कठोर संघर्ष गरे 'कमजोर र निराश।'
उहाँ एक पेशेवर फुटबलर बन्नुभयो, त्यहा वर्ष उनको बुबा मर्नुभयो।
लिलिभोल्ड को माम को बारे मा जानिन्छ जो मार्लोसिया सालोमोआ बोर्बा को रूप मा जानिन्छ। रिपोर्टहरूले उनीहरूको सबै जीवन गृहकर्मी बताएका छन्। तिनका बहिनीहरूका लागि। रिवलडोडो रिकार्डो विल्ट र रीनाल्डो बोर्बा फ्रेरेरा नामक दुई भाइहरू छन्। साथै, एक बहिनी नाम क्रिस्टियन फ्रेरेरा डिनिज।
रेivalival बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -क्यारियर सारांश
जस्तै Didier Drogba, रेivaldodo ले कहिलेकाहीं कुनै पनि युवा फुटबल खेल्दैन। उनी पनि आफ्नो करियरको ढिलो स्टार्टर थिए। उनले वर्ष 1991 उमेरमा 19 मा फुटबल खेल्न थाले। 1991 - 1993 को बीच, रिभाडोडो सान्टा क्रुज, मोगी मिर्मिम र कोरिन्थियन को लागि खेले।
1994 मा, उनले स्थानीय allegiances को बदल्यो र Palmeiras मा गएर, त्यहि वर्षमा लीग च्याम्पियनशिप को सफलतापूर्वक क्लब को रक्षा गर्न को लागी।
1996 ओलम्पिक भन्दा पहिले, पarmaले घोषणा गरे कि उनले पलमेराबाट रिवलडो र उनको टोली अमरलमा हस्ताक्षर गरे। ओलम्पिक पछि, त्यहाँ एक विवाद थियो, र इटाली भन्दा सट्टा, रोइभाडो स्पेन जानुभएको थियो जब तिनी लागागामा डिपोर्टिओ ला कोरुनामा सामेल भए।
तिनी पछि 1997 मा एफसी बार्सिलोनामा गए र रेकर्ड ट्राभल डिलमा डेट्रोटोवो एक4अरब पेसटेस (लगभग $ 26 मिलियन) स्थानान्तरण शुल्क सुरक्षित।
बार्सिलोना मा उनको पहिलो सीजनमा, रेवलडोडो ले ला लिगा च्याम्पियनशिप र कोपा डेल राइ डबल जित्यो। 1999 मा, उनले बार्सिलोनासँग अर्को लागा शीर्षक खिचे। रेivaldo को फीफा वर्ल्ड प्लेयर को नाम ले नामित गरे र त्यहि वर्ष Ballon d'Or जीता।
बार्सिलोनाको असफल च्याम्पियन्स लीग अभियान पछि, रेइलिडोडो वर्ष 2002 मा क्याम्प नाउ देखि मिलान सम्म पुगियो। उनको वैवाहिक समस्या पनि कारण मिलान थियो।
रिलिल्डो को शुरुआती 2004 मा ब्राजील मा फर्कने निर्णय गरे, कोच वेंडीले Luxemburgo को नियुक्ति द्वारा, जो उनको सबै यूरोपीय प्रस्तावहरु लाई त्याग्न मा विश्वास गरे। तथापि, टोलीको माध्यमबाट उनको पास धेरै छोटो थियो (11 खेलहरू र2लक्ष्यहरू)।
22 जुलाई 2004 मा, रीयलिडोडो ओलम्पियकोसमा सामेल भएपछि यूरोपमा फेरि फर्केर आए। उनले ओलम्पिकको लागि 43 खेलहरूमा 81 लक्ष्यहरू बनाए।
उनले ओलम्पियको द्वारा रिलीज गरे पछि क्लब को अध्यक्ष संग विवाद पछि रिहा गरेको थियो जसले दावा गरे कि त्यो क्लब जारी राखन को लागी धेरै पुराना थियो। उनले छोडे र आफ्नो क्लबको स्वामित्व लिनुअघि सानो क्लबको होस्टलको लागि खेल्न गए। बाकि, जस्तै तिनीहरू भन्छन्, अब इतिहास हो।
रेivalival बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -के उहाँ सम्झनुभएको छ
उनको असाधारण (र महंगी) बायाँ पाङ्गको लागि।
ब्राजिलका जादुगरहरूको लामो लाइनमा उत्कृष्ट हुनुपर्दछ।
गति को उनको संयोजन को लागि, घातक रूप देखि सटीक शूटिंग र रचनात्मक dribbling।
एक मिनेटमा खराब खेल समाधान गर्न सक्षम हुनुको लागि।
समस्या खेलाडीको लागि। वेतन वार्तामा एक कठिन व्यक्ति।
मृत-बल विशेषज्ञको लागि, रिलिभाडो उनको झुकाव मुक्त किकहरूको लागि प्रसिद्ध थियो, र दण्ड लगाउँदै।
उनको साइकिलको लागि कुक। मलाई शर्त छ कि तपाईं यो फोटो राम्रोसँग सम्झनु हुन्छ। 🙂
'फीफा 100' बीचमा। यो ब्राजीली किंवदंती द्वारा संकलित सबै भन्दा ठूलो जीवन फुटबल को एक सूची थियो पेल.
अन्तमा, रिलिल्डोले बैङ्क डी 'वा साथ साथै 1999 मा एफआईएफए वर्ल्ड प्लेयरको इयर अवार्ड जित्नको लागि सम्झना गरिन्छ।